Tsidika · Janoary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Tsidika · Janoary, 2013
Tantara mikasika ny Tsidika tamin'ny Janoary, 2013
Patagonia Arzantiniana: Ankafizin'ny Bilaogera Mpandehandeha sy ny Mpizaha tany any Arzantina
Arzantina 27 Janoary 2013
Amin'ity vakansy fahavaratra 2013 ity dia nisafidy an'i Patagonia Arzantiniana [en] ho iray amin'ny toera-pizahantany ankafizina indrindra ny Arzantiniana.
Tsy Misy Fahazoan-dàlana Hivoaka: Miteny Ireo Kiobàna Any Am-pielezana
Karaiba 16 Janoary 2013
aorian'ireo vinavina, nitranga ihany ilay izy nony farany. Nofoanan'ny governemanta Kiobàna ny filàna fahazoan-dàlana hivoaka - indrindra fa ny fanomezan-dàlan'ny fanjakana - handao ny firenena. Ireo bilaogera, avy amin'ny Kiobàna any am-pielezana no ankamaroan'izy ireny, dia nizara ny fomba fisainany mikasika ity fivoaran-draharaha vaovao ity.
Ny dian'ny Lavanila, avy any Meksika ka mipaka any Madagasikara
Afrika Mainty 13 Janoary 2013
Atoa Antoine Ganne no mitatitra ny fomba izay nihavian'ny Lavanila avy any Meksika ka zary nampalaza azy any amin'ny ireo Nosy Madagasikara sy La Réunion [fr]. Tantarainy ary fa mpivaromandeha Eorôpene no nividy Lavanila tany Meksika ary nitondra izany hoan'ny mpanjaka frantsay Louis XIV izay nikasa hamboly izany tany amin'ny...
Nahita Zava-baovao amin'ny Ifandraisan'i Porto rico sy Corse ireo Mpianatra
Amerika Latina 10 Janoary 2013
Manana fifandraisana izay somary nampatsiahivana matetika nandritra ny fandaharam-pianarana nokarakarain'ny Oniversiten'i Porto Riko i Porto Riko sy i Corse. Ankoatra ireo endrika iraisana, toy ny jeografia sy ny fiavahana eo amin'ny fambolena (voly voasarimakirana vaventy), dia ampiraisin'ny tantara ihany koa ny nosy anankiroa hatramin'ny nifindràn’ireo Corses an-jatony nankany Porto Riko; nanomboka ny 1830.